Wararka - Falanqaynta xaaladda warshadaha birta 2021
Xiao Yaqing, Wasiirka Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyadda Warfaafinta ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha, ayaa dhowaan soo jeediyay in wax soo saarka biraha ceyriinka ah si adag loo yareeyo si loo hubiyo in wax soo saarka 2021 -ka uu hoos u dhici doono sannadba sanadka ka dambeeya. Waxaan fahansanahay in dhimista wax soo saarka birta ay tahay in lagu tixgeliyo saddexda dhinac ee soo socda: marka hore, u dir signalka warshadaha birta, oo tallaabo qaado hadda ka dib si aad u gaarto hadafyada “kaarboon kaarboon” iyo “dhex -dhexaadinta kaarboonka”; Midda labaad, yaree rajada ku tiirsanaanta macdanta birta laga soo dhoofiyo dhinaca baahida; Midda saddexaad waa in lagu hago shirkadaha birta iyo birta horumar tayo sare leh iyo hagaajinta tartanka.
Marka laga eego dhinaca qaab -dhismeedka sahayda biraha ee Shiinaha sannadka 2020, marka lagu daro koritaanka wax -soo -saarka birta gudaha, soo -dejinta birtu waxay sidoo kale ilaalisay koboc weyn, gaar ahaan soo -dejinta biilka ayaa kordhay ku dhawaad ​​shan jeer. 2021-ka ama xitaa waqti dheer, xitaa haddii ay jirto dheelitirnaan xilliyeed oo u dhaxaysa wax soo saarka iyo baahida, suuqa ayaa si wax ku ool ah u dabooli doona baahida suuqa gudaha iyada oo loo marayo is-xakamaynta xiriirada soo-dejinta iyo alaabada.
2021 -ka waa sanadka koowaad ee qorshaha shanaad ee 14 -aad, sidoo kale waa sanad muhiimad gaar ah u leh hanaanka casriyeynta Shiinaha. Warshadaha birta iyo birtu waa inay sii wadaan inay diiradda saaraan hawsha asaasiga ah ee si dhammaystiran u hagaajineysa aasaaska warshadaha iyo heerka silsiladda warshadaha, u hoggaansamaan labada mowduuc ee horumarka ah ee horumarinta cagaaran iyo waxsoosaarka caqliga leh, xoogga saara xallinta saddexda dhibcood ee warshadaha, awoodda xakamaynta ballaarinta, kor u qaadista xoojinta warshadaha, hubinta amniga kheyraadka, sii wad kor u qaadista hannaanka caalamiga ah, oo bilow joogto ah oo wanaagsan u leh xaqiijinta horumarka kaarboon-yar, cagaar iyo tayo sare leh. In la dhiso xarunta xogta weyn ee warshadaha birta iyo birta, sahaminta habka wadaagista xubinta xogta, iyo hagaajinta kartida maareynta xogta iyo adeegga; Ku tiirsanaanta shirkadaha hogaaminaya si kor loogu qaado wax -soo -saarka iskaashiga saldhigyada badan, kor loogu qaado silsiladda warshadaha oo dhan iyada oo la raacayo qaab -dhismeedka Internet -ka warshadaha, kor loo qaado wadaagga macluumaadka, wadaagga kheyraadka, wadaagista naqshadeynta iyo wadaagidda wax -soo -saarka inta u dhexeysa kor iyo hoos warshad ”dhinacyo kala duwan leh, oo samaysa nooc cusub oo wax -soo -saar caqli leh oo bir iyo bir ah
Waqtiga dhejinta: Jun-28-2021